मत्ती मर्कूस लूका यूहन्ना प्रेषित रोमी १ कोरिन्थी २ कोरिन्थी गलाती एफिसी फिलिप्पी कलस्सी १ थिस्सलोनिकी २ थिस्सलोनिकी १ तिमोथी २ तिमोथी तीतस फिलेमोन हिब्रू याकूब १ पत्रुस २ पत्रुस १ यूहन्ना २ यूहन्ना ३ यूहन्ना यहूदा प्रकाश १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३
२ यसैकारण, आफूले सुनेका कुराहरूमा हामीले सदाभन्दा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ ताकि हामी कहिल्यै तर्केर नजाऔं। २ यदि स्वर्गदूतहरूद्वारा बताइएको वचन स्थिर साबित भयो र हरेक अपराध अनि अनाज्ञाकारिताले त न्यायबमोजिम दण्ड पायो भने ३ यस्तो महान्‌ उद्धारलाई बेवास्ता गरेर हामी कसरी बचौंला? यो उद्धार यसैकारणले महान्‌ छ किनभने यसबारे हाम्रा प्रभुले पहिला बताउनुभयो अनि उहाँको कुरा सुनेकाहरूले यो कुरा सत्य हो भनेर हाम्रो लागि पुष्टि गरिदिए। ४ साथै, परमेश्वरले पनि चमत्कार, आश्चर्यजनक कार्य र विभिन्न शक्तिशाली कामहरूद्वारा अनि आफ्नो इच्छाबमोजिम पवित्र शक्ति बाँडेर यसको साक्षी दिनुभयो। ५ किनकि हामीले जुन आउनेवाला पृथ्वीबारे बताइरहेका छौं, उहाँले त्यसलाई स्वर्गदूतहरूको अधीनमा राख्नुभएको छैन। ६ यस कुराको प्रमाण दिंदै एक जना साक्षीले कतै यस्तो लेखेका छन्‌: “मानिस के हो र, तपाईं उसको विषयमा सोच्नुहुन्छ वा मानिसको छोरा, जसको तपाईं ख्याल राख्नुहुन्छ? ७ तपाईंले उसलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा अलि निम्न कोटिको बनाउनुभयो; उसलाई गौरव र आदरको मुकुट पहिराउनुभयो अनि आफ्नो हातको रचनामाथि अधिकार दिनुभयो। ८ तपाईंले सबै कुरा उसको पाउमुनि राखिदिनुभयो।” किनकि परमेश्वरले सबै कुरा उसको अधीनमा राख्नुभयो, उहाँले उसको अधीनमा नराख्नुभएको कुनै कुरा छैन। यद्यपि, अहिले सबै कुरा उसको अधीनमा भएको हामीले अझै देखेका छैनौं। ९ तर हामीले येशूलाई भने देखेका छौं, जो स्वर्गदूतहरूभन्दा अलि निम्न कोटिको बनाइनुभयो र मृत्यु भोग्नुभएकोले उहाँलाई गौरव र आदरको मुकुट पहिराइयो। साथै, परमेश्वरको असीम अनुग्रहद्वारा उहाँले हरेक मानिसको लागि मृत्यु चाख्नुभयो। १० सबै कुरा परमेश्वरको लागि अस्तित्वमा आए अनि उहाँद्वारै ती अस्तित्वमा छन्‌। यसैले धेरै छोरालाई गौरवान्वित बनाउन तिनीहरूको उद्धार गर्ने मुख्य माध्यमलाई दुःखकष्टद्वारा सर्वगुणी बनाउनु उहाँलाई उचित लाग्यो। ११ जसले पवित्र पार्दैछ अनि तिनीहरू जसलाई पवित्र पारिंदैछ, दुवै एकै जनाबाट आएका हुन्‌ र यसैकारण उहाँ तिनीहरूलाई आफ्ना “भाइहरू” भन्न सर्माउनुहुन्न, १२ जस्तो उहाँ भन्नुहुन्छ: “म तपाईंको नाम मेरा भाइहरूलाई घोषणा गर्नेछु; मण्डलीको माझमा म तपाईंको स्तुतिगान गाउनेछु।” १३ अनि फेरि: “म उहाँमा मेरो भरोसा राख्नेछु।” अनि फेरि: “हेर! म र यी साना केटाकेटीहरू, जो यहोवाले मलाई दिनुभयो।” १४ तसर्थ, “साना केटाकेटीहरू” रगत र मासुले बनेका हुनाले उहाँ पनि तिनीहरूजस्तै हुनुभयो, ताकि जससित मृत्युमा पुऱ्याउने क्षमता छ अर्थात्‌ दियाबललाई* आफ्नो मृत्युद्वारा नामेट पार्न सकियोस्, १५ अनि मृत्युको डरले गर्दा जो जीवनभरि दासत्वमा परेका थिए, तिनीहरू सबैलाई मुक्त गर्न सकियोस्। १६ किनकि उहाँले वास्तवमा स्वर्गदूतहरूलाई होइन तर अब्राहामको वंशलाई मदत गरिरहनुभएको छ। १७ यसैकारण, परमेश्वरसित सम्बन्धित कुराहरूमा कृपालु र विश्वासी प्रधान पुजारी बन्न सकियोस् र यसरी मानिसहरूको पापको लागि प्रायश्‍चितको बलिदान चढाउन सकियोस् भनेर उहाँ हर तवरमा आफ्ना “भाइहरू” जस्तै बन्नु आवश्यक थियो। १८ परीक्षामा परेको बेला उहाँ आफैले दुःख भोगिसक्नुभएकोले परीक्षामा परिरहेकाहरूलाई मदत गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ।
^ हिब्रू २:१४ * ग्रीकमा “दियाबोलोस,” जसको अर्थ हो “निन्दक।”